အရသာထူး | CeleTrend
July 25, 2020 by CeleTrend
” အ. အားးး အီးးး အ အ လှိုင်းတွေလှိုင်းတွေ မူးရိပ်ရိပ် အားးးရှီးးးး ” ” ဟင် ” ငါဘာဖြစ်နေတာလဲ ငါဘယ်ရောက်နေတာလဲ တခါမှ မခံစားဖူးတဲ့အရသာ မျက်လုံးအသာလေးဖွင့်ကြည့်မိတော့ မူးနောက်နောက်နဲ့ အာရုံတွေ စုစည်းမရ အိုရ် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဝတ်စားမရှိတော့။ နာမည်က– ချစ်မှူးအိမ်စည် အသက် ၂၅နှစ် ပုရိသတို့ဖမ်းစားနိုင်သူ ချစ်သူ ထူးဝေသော်နှင့် မကြာခင်လက်ထပ်တော့မှာမို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အကြိုပွဲလေး အပျော်စားပွဲသောက်ပွဲ ကျင်းပရာက အနည်းငယ်မူးလာသဖြင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက အိမ်လိုက်ပို့ရင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ” ဟင် ” “ဇော်” နင် နင် ဘာလုပ်နေတာလဲ ငါ ငါ့ကို သနားပါဟာ အဟင့် ဟင့်ကျမ စောက်ပတ်လေးကို အငမ်းမရ ယက်ပေးနေတဲ့ ” ရှိုင်းထက်ဇော်” ပေါင်နှလုံးကြားက ခေါင်းလေးမော့ပြီး ခွင့်လွတ်ပါဆိုတဲ့မျက်ဝန်းတွေ စကားသံမထွက်ပဲ ညှီစို့စို အပျိုစင်တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်ကြည်လေးများကို တစ်ပြွတ်ပြွတ်စုတ်ယူနေဆဲ။ လျှာထိပ်လေးနဲ့ အက်ကွဲကြောင်းလေးအားထိုးခွဲလိုက် အစိလေးအား ဆွဲစုပ်ပေးလိုက်တိုင်း တစ်ကိုယ်လုံး လေဟာနယ်ထဲလွင့်မျောသွားသလို။ ” ဟာ အ အ အားးရှီးးးးး ” ဝင်သက်ထွက်သက်တွေ ထိန်းချုပ်နေရင်းးး ကိုယ်တွင်းအောက်ပိုင်းက နွေးကနဲ့ တစ်ညိမ့်ညိမ့် ဒါတင် မပီးသေး ခွင့်လွတ်ပါ”မှူး”ရယ် ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ အတူ စောက်ပတ်လေးထဲ – ဇော့်- လီးကြီး တိုးဝင်လာနေတော့သည်။ အာရုံတွေဝေဝါးဆဲ အိပ်ရာခင်းကိုသာ လက်နဲ့ကျစ်နေအောင် ဆွဲထားဆဲ အင်းး ဟင်းးး အအ ခဏကြာတော့ ဦးနှောက်ကို အထိအတွေ့က အနိုင်ပိုင်းတယ်ဆိုရမလား ရမက်ဆန္ဒတွေနောက် ပေါင်လေးတွေ မသိမသာဟပေးရင်း တချက်တချက် ကော့ပေးနေမိလျက် ” အင့် အင်းးးး ” လက်ချောင်းလေးများက နို့သီးခေါင်းလေးများအား ခပ်တင်းတင်းခြေမွှပေးချိန် ” အ အ ရှီးးးး အလိုအလျောက် ‘ဇော့်’ ခေါင်းလေးကို ဆွဲချ မွတ်သိပ်စွာ အနမ်းတို့ ခြွေနေမိပေါ့။
အသက်ရှုနုန်းတွေ မြန်လာပီး ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ အညီ တုန်ပြန်တတ်လာခဲ့တာ “မောင်” မဟုတ်တဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်က လိုးနေတာ သာယာမိနေတာ ဒါဟာ တကယ်ဖြစ်နေတာလား မတွေးချင်ဘူး ခုချိန်မှာ နောင်တဆိုတဲ့အရာထက် ‘ဇော့်’ လီးကြီးရဲ့ အရသာကို မလွန်ဆန်နိုင်တော့တာမျိုးပါ။ ” အားးးးရှီးးးး မှူးရယ် ချစ်တယ်ကွာ အင်းးး အင်းးးး ” ” ဇော် ပြီးပြီ အ အ ရှီးးးးး ” မိန်းမ သဘာဝအရ ဇော့်လီးကြီးကို တင်းနေအောင် ညစ်ထားပေးရင်း သုတ်ရည်ပူပူလေးက မှူးအား ဒုတိယအကြိမ် အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိသွားတော့သည်။ တစ်ကယ်တော့ ရှိုင်းထက်ဇော် နဲ့ ချစ်မှူးအိမ်စည် ဆိုတာ ငယ်သူငယ်ချင်း ခြံခြင်းကပ်လျက်ပါ နှစ်အိမ်တစ်အိမ်နေကြတာမျိုး အချစ်ဆိုတာလဲ ဆန်းကြယ်လှတယ် ငယ်သူငယ်ချင်းသံယောစဉ်ကို ကျော်ပြီးမှ ရှိုင်းထက်ဇော်သူငယ်ချင်း ထူးဝေသော်ကို ချစ်မှူးအိမ်စည်က ပြန်ချစ်ခဲ့တာ။ ထူးဝေသော်က မိဘတွေလုပ်ငန်းမှာပဲ ဦးစည်းပြီး အထည်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူအသက် ၂၆ ခပ်ညိုညို အရပ်မောင်းအနေတော်ပါ။ ရှိုင်းထက်ဇော်အိမ် ဝင်ထွက်ရင်း “မှူး” ဆိုတဲ့ အလှနတ်သမီးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာ။ ရှိုင်းထက်ဇော်တို့က ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ရတနာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လာတဲ့ သူဋ္ဌေးမျိုးရိုး အချိန်တန်ရင် မှူးကိုသူပိုင်ဆိုင်မယ် ထင်ပြီး လျော့တွက်ခဲ့မိတော့ ခုတော့ အသဲကွဲနေရသူ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်လွန်ရမှ အိမ်ပြန်ပို့ပေးရင်း ချစ်မှူးအိမ်စည်ရဲ့ ပန်းဦး မရ ရအောင် ခူးခြွေပစ်တာ နောက် တစ်ပတ်ထဲ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ထူးဝေသော်နဲ့မှူးတို မင်္ဂလာဆောင်ကြတော့မှာ သူ့တွက်က နောက်ဆုံးအချိန်တွေ ။ ဒီနေ့ “မောင်” ဖုန်းဆက်တယ် မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံသွားရွေးမှာမို့ စောစောထ ရေချိုးအလှပြင်ရင်း စောင့်နေမိချိန် အဖေနဲ့အမေလဲ ဘုရားသွားကြသည်။ ” မှူး ရေ မှူး ” “ဟင်” ဇော် ဘာလာလုပ်တာပါလိမ့် အရင်ရက်က အဖြစ်ပျက်တို့ကြောင့် မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်တော့ဟူးးးးး မှူး တံခါးဖွင့်ပါဟာ နောက်ဆို နင့်ကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး ခဏလေးပါ မှူးရယ် “မောင်” လည်းခဏနေ လာခေါ်တော့မှာ ဖွင့်ပေးလိုက်မယ် မြန်မြန်ပြော မြန်မြန်ပြန် ပြီးတာပဲလေ။ ရုတ်တရက်ပဲ အိမ်ထဲအတင်းဝင်လာပီး မျက်နှာချင်းဆိုင် အနမ်းကြမ်းကြမ်းတွေ လက်ခံမိပြန်ပြီ စွင့်ကားနေတဲ့တင်သားတွေပေါ် ခပ်တင်းတင်းပွတ်ချေပေးတာလည်း အလိုက်သင့်နေမိပြန်တာ သူ့ပုဆိုးကြားက မာမာကြီးတစ်ခု စေ့ဆော်မှု့ကြောင့် ထင်ပါရဲ့ ဆီးခုံးလေးပေါ်ထောက်မိလျက်သား ” အား ရှီးးးး ” အဖုတ်လေးဆီက ဆစ်ကနဲ့ သိသိသာသာ သတိထားမိလိုက်ပြန်တယ်။
မိန်းမောနေရင်း ထမိန်ကွင်းလုံးချွတ် အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးချွတ်တော့လည်း အလိုက်သင် မသိမသာကူညီပေးမိနေတာ ခုချိန်ဆုတောင်းမိတာ မောင်ရောက်မလာပါစေနဲ့ပေါ့။ ” အားးး ရှီးးးး ကျွတ် ဟာကွာ အင့် ” အင်္ကျီလိပ်တင်ပီး ဘရာစီယာ အပြင်ကဆုပ်ချေနေတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ မာတာတာလေးဖြစ်နေတော့သည်။ ရုတ်တရက် “ဇော်” ဒူးထောင်ထိုင်ပီး ကျမကိုယ်ကို ဆွဲလှည့်ရင်း ခါးကို အနည်းငယ် ညွတ်ချခိုင်းတယ် သူ့မျက်နာရှေ့မှာ ကျမ ဖင်ကုန်းယက်လေးပေါ့။ အဖုတ်ကိုနောက်ကယက်ရင်း ဖင်ဝလေးကို တချက်ချက် လျှာထိပ်လေးနဲ့ လာလာထိုးးးတာ ” အားးး ရှီးးးး ကျွတ်ကျွတ် အင်းဟင်းးး ဟင်းးး ” ဘာနဲ့မှမတူညီတဲ့ စည်းစိမ်တစ်မျိုးပါပဲရှင်။ ရမ္မက်စည်းစိမ်ကြောင့် အသိစိတ်ပျောက်လုလုနဲ့ ပေါင်နှဖက်မသိမသာလေးကား “ဇော်” ခေါင်းကို နောက်ပြန် လက်နဲ့ဆွဲကပ်ရင်း အကြိမ်ကြိမ် ပီးခဲ့ရပြီ။ ” အားးး ဟူးးး ကောင်းလိုက်တာ “ဇော်”ရယ် ” ကျမလည်းထိုင်ချပစ်လိုက်ရတာ “ဟင်” ဇော်”ပုဆိုးကြားက ဖေါင်းထွက်နာ အိုရ် ဟုတ်တယ် မှူးရယ် ကိုယ့်လီး စုပ်ပေးပါ့လား ခဏလေးပါ – လုပ်ပါကွာ ဒါနောက်ဆုံးမို့ပါ။ ဇော်မတ်တပ်ရပ်ပြီး ပြောပြောဆိုဆို ပုဆိုးချွတ်ချလိုက်ရာ မှူးမျက်နာရှည့် လီးကြီးမှာ အရှည် ၇လက်မခန့် နီညိုရောင်အသားနဲ့ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထလျက် ဖိတ်ခေါ်နေသယောင် ။ သူတောင် ငါ့အဖုတ်ရော ဖင်ရော ယက်ပေးခဲ့တာပဲလေ အတွေးမဆုံးမှီ လက်တဖက်က “ဇော့်” လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း ဖြည်းဖြည်းချင်း ငုံပေးလိုက်သည်။ “မောင့်” လီးကိုပင် စုပ်မပေးဘူးခဲ့ အလွန်ဆုံး ပုဆိုးအပြင်ကနေ ဂွင်းပဲထုပေးခဲ့ဘူးတာ။ “ဇော်”လည်း အားမရဟန်နဲ့ မှူးခေါင်းလေးအား လက်နဲ့ထိန်းပြီး ပါးစပ်ကို လိုးနေလိုက်သည်။ ” အားးး အားးး ကောင်းလိုက်တာ မှူးရယ် ” မှူးလည်း ပါးစပ်ကို အလိုးခံရင်း ခွင့်လွတ်ပါ “မောင်” မြတ်မြတ်နိုးနိုး မောင်နမ်းဖူးတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံမှာ သူစိမ်းယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့လီးက နေရာယူနေပြီလေ။ ထိုစဉ် တီတီ တီတီ အိမ်ရှေ့မှ ကားဟွန်းသံနှစ်ယောက်သား ကြားလိုက်မိသည် လီးကို ပါးစပ်မှ ထုတ်၍ အဝတ်စားများ အမြန်ပြန်ဝတ်လိုက်ကြသည်။ “ဇော်” နင် နောက်ပီးမှပြန်နော် ငါအရင်ထွက်မယ် “မောင်” တွေ့သွားရင် မကောင်းဘူး။
ထိုနောက့် “မောင့်” ကားလေးပေါ်ဝင်ထိုင်ရင်း မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်မယ့် အဝတ်စားများရွေးရန် ထွက်ခဲ့လိုက်တော့တယ် လမ်းတွင် မောင်က ကားခဏရပ်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့နမ်းချင်သလိုမို့ “အိုရ်” လူတွေနဲ့မောင်ရယ် အိမ်ပြန်ရောက်မှနော် အမှန်တော့ “ဇော့်” လီးကြီးစုပ်ပေးထားတာမို့ “မောင့်” အပေါ်အားနာမိတာပါ။ ဒါပေမယ့် မောင်က မှူးလက်ကို ဆွဲပြီး သူ့ပေါင်ကြားထဲက အမြှောင်းလိုက်ထနေတဲ့ သူ့လီးကြီးပေါ်တင်ပေးတဲ့အခါ ။ အော်လရောင်ကင်းတဲ့ ပင်လယ်အပျိုမ တစ်ကောင် ရင်ထဲစိုးတစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့ ညည်းတွားလို့နေလျက်ခန်းမထဲမှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ “မောင်” နဲ့ “ကျမ” ရဲ့ အပြုံးများ ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟ တို့၏ အပြုံးများ အရာအားလုံး ပျော်ရွှင်ခြင်း အတိပေါ့ ဧည့်သည်တွေအားလုံး ဧည့်ခံပေးရင်း မူးနောက်နောက်နဲ့မို့ “မောင့်” ကို ပြောပြပြီး ခန်းမ အတွင်းဖက် စတိုခန်းထဲ ခဏနားပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ “မောင်” နဲ့ “ဇော်” တို့ စကားပြောနေတာ တွေ့လိုက်ရတာ။ မှူး နဲနဲတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် တစ်ယောက်ကမိမိလက်ထပ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကမိမိ အပျိုစင်ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ သူတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် စကားပြောနေရာဆီသို့ ဖြည်းဖြည်းခြင်း လျှောက်သွားလိုက်သည်။ မှူး သက်သာရဲ့လား ဧည့်သည်တွေလဲနည်းသွားပါပြီ ဟုတ် “မောင်” ဟုပြောရင်း “ဇော်” ကိုပါ နုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် ထိုနောက် မင်္ဂလာပွဲပြီးတော့ မှူးတို့နေမယ့် တိုက်ခန်းအသစ်ကို မောင့်သူငယ်ချင်းတွေက လိုက်ပို့ကြတော့သည်။ မောင်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ တရုန်းရုန်းပေါ့ တိုက်ခန်းရောက်တော့ လူပျိုနောက်ဆုံးညမို့ မောင့်အား ယာမကာများနှင့် ဧည့်ခံပေးဖို့ ဘီယာဆိုင်သို့ ဇွတ်ခေါ်ကြလေသည် မောင်ကလဲ ကျမတစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့မှာမို့ အိမ်မှာပဲ ဝယ်သောက်ဖို့ပြောရင်း ဟျောင့် ဖိုးဇော် မင်းသွားဝယ်ကွာဟု ပြောဆိုလိုက်သည်။ “ဇော်” ဘီယာပုလင်းများ ရွမ်၂တောင့် ငါးမှုတ်ကြော် အာလူးကြော်များနဲ့ ပြန်ရောက်လာတော့ စားကြသောက်ကြပေါ့ ကျမလည်း ပင်ပန်းလာလို့ မောင်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ သောက်ကြနော် အခန်းထဲနားတော့မယ်ဟု ပြောပြီး ကျမတို့အိပ်ခန်းလေးထဲ ဝင်လာခဲ့တော့သည်။ နောက်ထပ် ၂နာရီလောက်အကြာမှာတော့ ခပ်ပြင်းပြင်းအရက်နံများနဲ့အတူ မောင် ဝင်လာခဲ့သည် မှူး လေး အိပ်ပျော်နေလား မောင်လာပီလေ – အေ့ ဂေ့ မူးမူးရူးရူးနဲ့ အဝတ်စားပင် မလဲမိသောမှူး ချိတ်ထမိန်လေးအားလှန်ပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေရာ မကြာမှီ စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ မောင့်လရည်ပူပူများစီးဆင်းလာခဲ့ရသည်။
မှူး ဘက်က ဇပ်တငမ့်ငမ့် ကာမအရသာကို မခံစားလိုက်ရ ကြိတ်မိတ်အိပ်တော့လည်း မရ ရေချိူးခန်းဘက် အဖုတ်လေးဆေးကြောဖို့ ထွက်လာရာ ဧည့်ခန်းထဲမှ ညည်းသံ သဲ့သဲ့လေး ကြားနေရသည်။ “ဟင်” ဘယ်သူပါလိမ့် ဧည့်ခန်းဘက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရာ *အမလေးးး*လေးး “ဇော်” တစ်ယောက်မူးပြီး အိမ်မပြန်နိုင်လို့ထင်တယ် ပုဆိုးက အထက်လှန်တက်လို့ ဆီတီခုန်ပေါ်မှာ ခြေနှချောင်း အောက်ကိုတွဲလောင်းချလျက် မှူးရယ် ချစ်တယ်မှူးရယ် တတွတ်တွတ် ညည်းနေရင်း လီးကိုအထက်အောက် ပွတ်ဆွဲနေသည်။ မောင်နဲ့ အာသာမပြေတဲ့စိတ်တွေ ထပ်မံနိုးကြွခဲ့လာရာ အသိစိတ်တွေလွင့်ပျောက်ခဲ့ရတော့သည် တင်းမာနေသော နို့အုံလေးနှစ်ဖက်ကို မိမိလက်ဖြင့်ချေရင်း ဇော် ပေါင်ကြားထဲ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်မိသည် လီးထိပ်က အရည်ကြည်ဥလေးများက တစ်စက်စက်နဲ့ကြည့်နေရင်း မှူးနုတ်ခမ်းလေးက အလိုအလျောက် ငုံမိသွားသည်။ ထို့နောက် ဇော့်လက်ကိုဖယ်ပြီး မှူးလက်နဲ့ လီးအရင်းကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း အငမ်းမရ စုပ်ပေးလိုက်သည် အွန်းး အုအု လီးကြီးမှာ ပါးစပ်ထဲတင်းကနဲ့ တင်းကနဲ့ မှူးအဖုတ်လေးထဲမှ စောက်ရည်များနဲ့ မောင့်သုတ်ရည်တွေ စီးကျလာခဲ့ရသည်။ ထိုစဉ် လီးကြီးမှ ပူနွေးပွတ်တိုက်မှု့ကြောင် “ဇော်”တစ်ယောက် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ ” ဟင် မှူးပါလား အ အ အင့် ရှီးးးး ” မိမိလီးအား လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီး ဒူးထောက်၍ အားရပါးရစုပ်နေသော မှူးအားတွေ့လိုက်ရသည်။ ဘယ်အချိန်ထဲကစုပ်နေမှန်းမသိလီးကကျင်တက်လာပြီး ပီးချင်သလိုမို့ မှူးပါစပ်ထဲက ထုတ်ပြီး ကျနော့်လီးစုပ်ထားတဲ့ မှူးနုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲနမ်းမိသည် မှူးပါးစပ်က လီးနံ့လေးကလည်း တမျိုးလေးခံစားမိရတယ် ခဏကြာတော့ မှူးက မတ်တပ်ထရပ်ကာ ချိတ်ထမိန်လေးအားချွတ်ပြီး ကျနော့်မျက်နာအား ဆွဲယူ၍ အောက်ခံဘောင်းဘီမချွတ်နိုင်တော့ပဲ နေရာ အနှံပွတ်နေတော့သည်။ ကျနော်လည်း မှူးအတွင်းခံလေးအား ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ မှူးက ပေါင်လေးကားရင်း မျက်နှာရှေ့တည့်တည့် စောက်ဖုတ်လေးအားကော့ပေးနေသည်။ စောက်ဖုတ်လေးမှာဖေါင်းကားနေရင်း အရည်များကျလာရာ ကျနော်လည်းယက်ပေးလိုက်သည်။ အားးး ကောင်းလိုက်တာဗျာ ယက်နေရင်းနဲ့ သူ့ယောင်္ကျားလိုးထားတဲ့ လရည်တွေပါ ပါးစပ်ထဲဝင်ကုန်တာ ရွံပေမယ့် မှူးအရှိန်မပျက်အောင် မျိုချပစ်မိတယ်ဗျာ ။
” အ အားးးရှီးးးး ကောင်းလိုက်တာ ဇော်ရယ် နာနာလေး ဖိဖိယက်ပေးပါ အားးး အ ရှီးးးး ” မှူးဆီက ရမ္မက်သံပြင်းပြင်းနဲ့ တောင်းဆိုမှု့တွေ ဧည့်ခန်းလေးအတွင်းမှာ မချိတင်ခဲပေါ့။ စောက်ဖုတ်လေးနုတ်ခမ်းသားလေးတွေ ယက်ရင်း အစိလေးအား ဆွဲစုပ်ပေးလိုက်ရာ ” အားးးး အားးးးး ဇော်ရယ် အားးးရှီးးးး ကျွတ် ” အသံမျိုးစုံ သည်းတွားရင်း ကျနော့်မျက်နာပေါ် စောက်ရည်များ ဒလဟော ပန်းထုတ်ခဲ့သည်။ စောက်ရည်များ ကုန်သည်အထိ ပေါင်ဖြင့်ညှပ်ထားရာ အသက်ရှုကျပ်လာမိသည်။ ခဏနားပြီးတော့ “ဇော်” နင် မပြီးသေးရင် လိုးလေကွာ ပြောပြီးပြီး မှူးတယောက် ခေါင်းငုံထားမိသည် ကျနော်လည်း မှူးစောက်ဖုတ်လှလှလေးကို လိုးချင်လှပါပြီ မှူးက ကြမ်းပြင်ပေါ်ပက်လက်လှန်ရင်း ဒူးထောင်ပေါင်ကားပြီး အဖုတ်လေးအား ဖြဲပေးထားရာ လီးကိုထည့်၍ ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုးပေးလိုက်သည်။ ယောင်္ကျားဖြစ်သူထက် ဇော့်လီးက အလိုးခံရတာပိုပြီး အရသာထူးနေပြန်သည်။ ” အွန်းးး အရမ်းအလိုးခံလို့ ကောင်းတာပဲ ဇော်ရယ် ” မာထင်နေတဲ့လီးကြီးအား ညှစ်ပေးနေရင်း အဖုတ်လေးကို ကော့ပေးလိုက်သည်။ ကျနော်လည်း ကော့ပေးလာတဲ့ မှူးစောက်ဖုတ်လေးအား ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးရာ ပေါင်လေးနှစ်ဖက်အား အစွမ်းကုန်ကားပေးရင်း ” အားးး အားးးး ရှီးးးး ကောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာ ဇော်ရယ် နာနာလေးလိုးပေးပါ လိုးပေးပါ အားးး အ အ ဟူးးးးးးး ‘ မှူး တယောက် ကာမစည်းစိမ်ကို အားရပါးရ ခံစားနေတော့သည်။ ကျနော်လည်း မှူးစောက်ဖုတ်လေးအား ကြည့်ပြီး လိုးနေရင်း လီးကြီးအဝင်အထွက် အဖုတ်နုတ်ခမ်းသားနီတာရဲလေးတွေ လိပ်ဝင်သွားလိုက် အပြင်ပြန်ပါလိုက်နဲ့ အရသာထူးနေမိသည်။ လိုးရင်းတန်းလန်း ပီးချင်လာသဖြင့် စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးကို အမြန်ထုတ်ပြီး မှူး မျက်နှာပေါ် လရည်များပန်းပေးလိုက်သည်။ မှူးက စောက်ရည်နံ့ လရည်နံ့ သင်းပျံနေတဲ့ ကျနော့်လီးအား ပြောင်စင်အောင် စုပ်ပေးပြီး မိန်းမောလို့ နေပါတော့သည်။မနက်မိုးသောက်တော့ မင်္ဂလာကုတင်ကြီးပေါ်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေသော မောင့် ကို ကြည့်ရင်း နဖူးလေးအား တရှိုက်မက်မက် နမ်းပစ်လိုက်သည်။ “မောင့်” မျက်လုံးလေး ဖတ်ကနဲ့ပွင့်လာသည်။
“မိန်းမ- နိုးနေပီလားကွ” ရွှန်းလက်တောက်ပနေတဲ့ မောင့်မျက်လုံးတွေမှူး ရဲရဲ မကြည့်ရဲတော့ပါဘူး “မောင်” ညက အိပ်ပျော်သွားတုန်း ဧည့်ခန်းထဲမှာ “ဇော်”နဲ့ ချစ်ပွဲဝင်ခဲ့သည်မို့ တကယ်ပါ- မောင်ရယ် – ချစ်မေတ္တာတွေ တစ်ယောက်ရင်ထဲ တစ်ယောက် နက်ရှိုင်းတိုးဝင်လာအောင် မှူးကြိုးစားမှာပါ။ “မှူး ” မောင့် မိန်းမ ဖြစ်သွားပြီနော် ” ရှင် အင်းလေ မောင်ရဲ့ ” ” မောင် အရမ်းချစ်တယ် ” ” ချစ်ပါရှင်””ရင်ထဲကလာတဲ့ အသံလေးမို့ မှူးစ်ိတ်ထဲ နွေးကနဲတော့ဖြစ်တယ် – အားရကျေနပ်မိတယ် “မောင့်” အပေါ် ခံစားချက်တော့ရှိနေပါတယ် တဆက်ထဲ တွေးမိတာက – “ချစ်တယ် မှူးရယ်” အားးး ရှီးးး လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာကွာ အီးးး အအ “ဇော်ရဲ့ ရမ္မက်တွေပြည့်လျှံနေတဲ့ စကားလုံး ကြမ်းကြမ်းတွေ ။ ဟူးးးးး “အိုရ်ကွယ်” မောင်ရယ် ကျေးဇူးပြုပြီး မှူးရဲ့ အချစ်တွေရော ရမ္မက်ဆန္ဒတွေရော သိမ်းယူပေးပါ – လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တောင်းဆိုတာပါမောင်ရယ် — ။ မောင့် အနမ်းတွေ “မှူး” နှုတ်ခမ်းလေးမှတဆင့် လည်တိုင် – လည်တိုင်လေးမှ တဆင့် နိုအုံလေးများပေါ် — ။ ” သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပါ မောင်ရယ်” နှလုံးသားရဲ့အေးစက်မှု့တွေ မတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တာပါ သက်ရောက်မှု့က ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်- ထပ်ကြိုးစားပေးပါ- အင်းးး အင့် ဟုတ်ပီ-နို့သီးလေးများအားစုပ်ရင် ကျမအဖုတ်လေးအား ပွတ်ပေးနေသည်။ မှူး လက်တစ်ဖက်ကလည်း “မောင့်- ပုဆိုးပေါ်ကနေ လီးကြီးအား ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားသည်” မောင့်- ညည်းသံခပ်တိုးတိုးလေးပေါ့ နို့လေးစုပ်နေရာကနေ- ကျမ ထမိန်လေးဆွဲချွတ်နေလို့ မတ်တပ်ထရပ်ပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီလေးပါ ချွတ်ချပေးလိုက်တာပေါ့။ ဒီလိုအနေထားဆိုရင် “ဇော်” က ချက်ချင်းကုန်းထ မှူးစောက်ဖုတ်လေးကို အားရပါးရ ယက်ပေးတတ်တာ ဟူးးးး ” မောင်” ကတော့ သူ့အင်္ကျီကြယ်သီးများဖြုတ်လို့နေတယ်— သူအင်္ကျီချွတ်မပြီးခင်- ကျမ အသာလှဲချပြီး မောင့် ပေါင်သားများ နမ်းပေးနေခိုက် — ။ ” မိန်းမ လိုးကြစို့ကွာ မောင် အရမ်းလိုးချင်နေပြီ ” “မှူးလည်း လက်တဖက်က အစိလေးအားချေရင်း ပေါင်လေးကား မျက်စိလေးမိတ်နေလိုက်တော့တယ် ခံစားမှု့က အေးစက်စက် ပြန်ဖြစ်သွားရပါပြီလေ ခဏ အကြာမှာတော့ အဖုတ်လေးထဲက နွေးကနဲ့မို့ “မောင်” ပြီးသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတာ— ဟူးးးး နှစ်တွေ အလီလီကြာလို့ သားလေး ဝေယံတောင် သူငယ်တန်းစတက်နေပေမယ့် – မောင်နဲ့ကျမရဲ့ ကုတင်ပေါ်က ပြဇတ်တွေကတော့ အေးတိအေးစက်ပါပဲ — ။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေ့ရက်တွေ ဖြတ်သန်းရင်း- ရမ္မက်တွေ ဆန္ဒတွေ ဖက်တွယ်မိတဲ့ နှလုံးသားမှ အဆိပ်တွေ ဖောက်ထုတ်ပစ်ရင်း – အထီးကျန်ရပ်ဝန်းမှာ စိတ်ကူးကောင်းသလောက် နေထိုင်ရင်း – “မောင့် အတွက် ဇနီးကောင်းတစ်ယောက် ” ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ “ဇော်” ဆီက ဖုန်းဆက် ဇွတ်အတင်းပူဆာခဲ့သမျှ ခက်ခက်ခဲခဲ ငြင်းဆန်ရင်း မိသားစု အတွက် ကားလိပ်ချထားခဲ့တာ ကျေနပ်မိပါရဲ့— ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရရင်တော့ – ” ဒုတိယ အိမ်မက်အတွက်- ပထမ ကောင်းကင်ကို ကျမ မစွန့်လွတ်ခဲ့တာပါ ” လူဘဝက ခက်တော့လဲ ခက်သားပါပဲ သမုဒယ ယဇ်ပုလ္လင်ထက် ဒီတစ်သက် ဝေးစေဆိုတဲ့ စီရင်ချက် ချခံရသူက- “မှူး”ပါရှင် — ။
အတော်ကြာအောင် အဆက်သွယ်ပြတ်နေတဲ့ — “ဇော့်” ဆီမှ သူအိမ်ထောင်ပြုတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြား အပြီးထွက်သွားမှာမို့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တွေ့ခြင်ကြောင်း တောင်းဆိုနေရှာသည်။ “မှူးရယ်”– ဂျောင်ထိုးခံရတဲ့ တမြက်စည်းရဲ့ သွေးကြောထဲမှာတောင်– ခံစားချက်ဆိုတာရှိနေပါတယ်— “ဇော့်” ကိုသနားပါဦးကွာ— မှူးစကားကို နားထောင်ပါတယ် မတွေ့နဲ့ဆိုလို့ နှစ်ချီပြီး မတွေ့ခဲ့ပေမယ့်- တနေ့မှ မေ့မရသူပါ။ “ထွက်ပေါက်မှန်သမျှ ပိတ်ဆို့ထားနိုင်တဲ့ “ဇော့်”ရဲ့ သံယောစဉ် အပိုင်းအစတွေကြောင့် – ” မှူးလေ – မှူး ” ရမ္မက် နဲ့ သိတ်ခါ ဒွန်တွဲရင်း မလူးသာ မလွန့်သာ ကာမ ဝဲဂရက်ထဲက– လှေငယ်လေးကို လှော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်မိလိုက်တာပါ။ ဒီနေ့ — တနင်္ဂနွေ အလုပ်နားရက်မို့ ” မောင် နဲ့အတူ အိမ်မှာ ရှိနေပေမယ့် – မောင့်မျက်နှာ ရဲရဲ မကြည့်ရဲတော့ပါ — နက်ဖန်ဆို သားလေးလဲကျောင်းသွား – မောင်လည်းအလုပ်သွားမှာမို့– “ဇော့်” ကို အိမ်ခေါ်ထားလိုက်သည်။ မနက်လင်းတော့ ရင်ထဲတလှပ်လှပ် နဲ့ မောင်နဲ့သားလေးထွက်သွားပြီး မကြာပါဘူး “ဇော်” ရောက်လို့လာသည် အနည်းငယ် ဝလာသည်မှလွဲ၍ “ဇော်” မပြောင်းလဲပေ— ။ မှူးတို့ အိပ်ခန်းထဲ ကုတင်ကြီးပေါ်တွင် ” ဇော်” လက်ကလေးတွေ လှုပ်ရှား နေသည်– မှူး နို့တွေခပ်ကြမ်းကြမ်း ချေပစ်နေရာ– အိခ်- ဟုတ်တယ် ” မှူး လိုချင်တာ ” အာကွာ ကျွတ်ကျွတ် —- ရင်ထဲ တဖိန်းဖိန်းတရှိန်းရှိန်း အင်းးဟင်းးး – နို့သီးခေါင်းလေး တဖက် ငုံခံလိုက်ရချိန် အလိုလိုကော့မိလျက်သား– အားးး အ — ။ “ဇော်” က နို့သီးခေါင်းလေးတွေဖွဖွကိုက်လိုက် စို့လိုက်နဲ့ — ပေါင်အတွင်းသားလေးတွေကို အဖုတ်လေးအား မထိပဲ ကုတ်ခြစ်နေသည်။ ” အားးး ရှီးးးး အိခ့် အအ ဟူးးးးး ” မှူးကိုယ်တိုင် မနေနိုင်တော့ပါ မိမိစောက်စိလေးအား လက်တဖက်ဖြင့် ခြေနေရတော့သည်။ “မြင်ကွင်းက – ဇော့် အတွက် ရမ္မက်စိတ်တွေ ပြင်းထန်လာစေသည်။ ထိုစဉ် မှူး လက်တဖက်က “ဇော့်” လီးကြီးအား ပွတ်သတ်ပေးလိုက်ရာ လီးကြီးမှာ တင်းကနဲ့တင်းကနဲ့—- မှူးလက်ထဲတွင် မာထင်လာတော့သည်။ ဇော်လည်း ကုတင်ပေါ်မှဆင်း၍ ဒူထောက်ထိုင်လိုက်ရာ — မှူး က ခြေတွဲလောင်းချလျက် ဇော့်မျက်နာ တည့်တည့် ပေါင်လေးကားပေးထားသည်။ ” ဇော်” က မှူး စောက်ဖုတ်လေးအား လျှာဖြင့် ကလိလိုက်– လက်ခလယ်ဖြင့် ထိုးမွှေပေးနေရာ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားများပါ ယားတက်လာပြီး ဇော့် ခေါင်းဖမ်းကိုင်၍—- ခါးလေးကော့ကာ ဖိကပ်ထားမိသည်။ ဇော် သည် အဖုတ်လေးမှ မျက်နာခွာပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းမကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်ဒူးထောက်လျက် စောက်ရည်များနဲ့ဖောင်းကားနေသော မှူးအဖုတ်လေးထဲ – သူ့လီးကြီးအား ပစ်သွင်းလိုက်တော့သည်။
” အားးး – အမလေးးး အ အ – ကောင်းလိုက်တာ ဇော်ရယ် —- လိုးလိုးးးး အားးး အီးးး ” ” ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် – အ့ ဟုတ်တယ် စောင့်လိုး ဇော် မှူး ဒါမျိုး မခံရကြာပြီ လိုးးး ပေးပါ ” “လိုးး ပေးပါ ဇော်ရယ်” အားးး ရှီးးးးး အားးးးးး ” ခြေမလေးများအား စုပ်၍ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပစ်ပစ်စောင့်ရာ “မှူး” တစ်ယောက် အကြိမ်ကြိမ် ပြီးခဲရသည်။ ဇော် လည်း ပြီးချင်လာသဖြင့် မှူး – မှူးပါးစပ်ထဲ လိုးရင်း ပြီးချင်တယ်ကွာ။ အင်းးး “ဇော်” အဲတိုင်းနေ ပြောပြီးပြီးချင်းးး ပက်လက်လှန်လျက်လေး ကိုယ်လုံး တပတ်လှည့်ကာ ကုတင်ဇောင်းတွင် ဇက်ထား၍ ဦးခေါင်းအား လှန်ချလိုက်သည်။ ဇော့် ပေါင်ကြားတည့်တည့် ပါးစပ်လေးဟပေးလိုက်ရာ ” ဇော် ” က မှူးခေါင်းလေးအား ထိန်းပြီး လီး အရင်းထိ ဖိလိုးလိုက်သည်– အု အု ဘလွတ် ဘွတ် ဗြွတ် ဗြွတ် —- နူတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးအတွင်းလီးကြီးက ဝင်ထွက်နေတော့သည်။ ” အားးးး ရှီးးး ကောင်းလိုက်တာ မှူးရယ် အီးးး ဟားးးး အားးးး ထွက်ပီကွာ ဟူးး ရှီးးးး အားးးးးး ” ထိုအချိန် — ထူးဝေသော် မှာ သားလေးဝေယံတို့ ကျောင်းမှ ရပိုစ်ကဒ် ပါမလာသဖြင့် ဖုန်းဆက်သောကြောင့်—-အလုပ်မှ တိုက်ခန်းသို့ပြန်လာယူသည်။ တိုက်ခန်းရှေ့တွင် ကားတစ်စီး ရပ်ထားသည်ကို မြင်၍ ” အော် ” ဧည့်သည် ရောက်နာပါလား ဘယ်သူပါလိမ့် – ?? အတွင်းဖက် ဝင်လာရာ မိမိတို့ အိပ်ခန်းစီမှ ” အားးးး ရှီးးး ကောင်းလိုက်တာ မှူးရယ် အားးဟားးး ရှီးးးးး ” ဟင်” ယောင်္ကျားသံပါလား။ အိပ်ခန်းတံခါး အသာလေးဖွင့် လိုက်ရာ “ဟာ” – “ဟင်” ဘယ်လိုဖြစ်ကြပါလိမ့် ခေါင်းထဲမိုက်ကနဲ့ ဖြစ်သွားရသည်။ ကုတင်ပေါ်မှ ပက်လက်ကလေး ခေါင်း အောက်ချလှန်ထားသော– မိမိဇနီးလေးက မိမိမြတ်မြတ်နိုးနိုးနမ်းရှိုက်ခဲ့သော နှုတ်ခမ်းလေးဟကာ ပါးစပ်ကို အလိုးခံနေသည်။ “တောက်” ဒုန်း ဝုန်းးးး တံခါးကို အတွင်းထိ စောင့်တွန်းပြစ်လိုက်သည်။ ” ဟင် – မောင် ” “ဟာကွာ” ဒုန်းးးအုန်းး ဝုန်းး ခွမ်းးး ခလွမ်းးး တစ်ခဏချင်းပင် အဖြစ်ပျက်တို့မှာ မြန်ဆန်လွန်းသည်။ “မောင့်” ၏ ယူကျိုးမရ ခံစားချက်များက ဒေါသတရားအသွင် ကူးပြောင်းချိန်— အခန်းထဲမှ မှန်တင်ခုန်များ ကုလားထိုင်များ ပျက်စီးစုပုံ ပြန့်ကြဲနေတော့ သည်။ အဟင့်ဟင့် — ” မောင်” ရယ် မှူးဘယ်လိုပြောရပါ့မလဲ——- ဝမ်းနည်းခြင်း ရှက်ရွံ့ခြင်း – အားနာခြင်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းများက ရင်ထဲစို့တက်လာသည်။
မည်သည့်အသံမှ မထွက် – ခုချိန် အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒက အခိုးငွေ့များအဖြစ် “မောင့်” ရှေ့မှ ပျောက်ကွယ်သွားချင်မိသည်။ အဝတ်အစာများးမှာ ကုတင်ဘေးပြန့်ကြဲနေသဖြင့် – အိပ်ယာခင်းလေးဖြင့် ပတ်ထားရင်း — အဟင့် ဟင့်ဟင့် — ” မာယာ ပခြုပ် – ရမ္မက်အတုပ်အနှောင်တွေထဲမှာ—– တိုးဝင်ငြိတွယ်ခဲ့တဲ့— ရလဒ်။ “ဇော့်” ထံမှ ငါတောင်းပန်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရယ် မင်းကြိုက်သလိုလုပ်ပါ “မှူး”မှာအပစ်မရှိပါဘူး ငါ့အပစ်တွေပါကွာ – အဝတ်အစားပင် မဝတ်နိုင်သေး – လီးကြီးတန်းလန်းဖြင့် တောင်းပန်နေသည်။ မင်းတို့ ငါ့အပေါ်လုပ်ရက်ကြတယ်ကွာ –ဟူးးးး ဟူးး အိပ်မက်ဆိုးမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အသံမျိုး မင်းတို့ ၂ယောက်လုံး ဒီနေရာက ထွက်သွားပါတော့။ “မျှော်လင့်မထားတဲ့ အဖြစ်ပျက်တွေ” နဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ နံရံတွေက ” မောင် နဲ့ မှူး” ကြားးးး တံတိုင်း ခြားခဲ့ပါပြီလေ —— ဟူးးးးး ဟင့် ဟင့်။ နုရွနေတဲ့ ပွင့်ချက်လေးများပေါ် တွဲခိုနေတဲ့ ရေစက်လေးများအား ကြည့်ရင်းးးးးး အရာအားလုံးးးး ထုနဲ့ထည်နဲ့ မှုန်ဝါးးးး စေခဲ့ပါပြီ။ ခုဆို မောင်နဲ့သားလေးဝေယံ ကိုမတွေ့ရတာ ၆လ ကျော်နေပြီပေါ့—- မောင် တစ်ယောက်ကတော့ ၂လလောက်ပဲ အရက်သောက်စိတ်လေခဲ့ ပေမယ့် ပညာတတ်ပီပီ စိတ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရင်းးးး အလုပ်ပြန်လုပ်နေပြီး သားလေးနဲ့ ပျော်နေရှာသည်။ “မောင်” ရယ် နေရမလား ကြွေရမလားးးးး နေမယ်ဆို “မောင့်ခြေတော်ရင်းးး” ကြွေမယ်ဆိုလဲ “မောင့်ခြေတော်ရင်းးး ” မောင့်နုတ်ဖျား စီရင်ချက်ကို လက်ခံနေရင်း —- ရမ္မက်ရဲ့ကျေးကျွန် ” အမိုက်မ “ကို “အမှန် တစ်ခုလောက် ပေးသနားပါနော်” နှစ်ဖက်မိဘများကလည်း အဖြစ်မှန်သိရှိသွားချိန် ပြန်ပေါင်းထုတ်ရန် ဘယ်ဘက်ကမှ အစမပြုတော့ပါ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ငရဲညများးး ဖြတ်သန်းရင် ရာသီ အလီလီ လည်ပတ်ခဲ့လေသည်။ ထူးဝေသော် တစ်ယောက် စိတ်ရှုပ်နေသဖြင့် အရက်သောက်မိနေသည်။ သားလေးဝေယံသူငယ်ချင်းများက— မအေမရှိသူ ဘာညာဆိုပြီး ဝိုင်းစသဖြင့် ငိုယိုပြီးနေတော့သည်။ အပစ်မရှိသောသားဖြစ်သူအား စိတ်ချမ်းသာစေချင်သည်။ ဇနီးဖြစ်သူ၏ ဖေါက်ပြန်မှု့ကိုလည်း– စိတ်ထဲ မေ့ပျောက်မရ နောက်ဆုံးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာမာ ချလိုက်တော့သည်။ ရင်ထဲမှာတော့ သောကဒဏ်ရာတွေအပြည့်နဲ့ သက်ပြင်းတောမှာ အခါခါနှစ်နေရသူ နောက်ဆုံးမှာတော့ လစ်ဟာနေတဲ့ သားလေးမေမေနေရာအတွက် မနက်ဖြန်ကိုပြောပြဖို့ ယနေ့ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီ ဘဝက သိပ်တော့မလှခဲ့ပါဘူ….ပြီး။